Manapa-kevitra momba ny vokatra, serivisy na endrika vaovao | Martech Zone
Tamin'ity herinandro ity no azoko Toned In avy amin'ny Fivarotana Pragmatika.
Manodidina ny ampahatelon'ny lalana mamaky ilay boky aho izao ary mankafy azy. Betsaka ny ohatra azo tsapain-tanana momba ny fomba nitarihan'ny orinasa hubris azy ireo ho amin'ny lalan'ny fanapahan-kevitra ratsy satria tsy 'Nofidina' ho an'ny vinan'izy ireo. Amin'ny alàlan'ny tsy fahitana izay ilain'ny antenain'izy ireo dia nanangana vokatra, serivisy na endri-javatra maimbo ireo orinasa.
Miaraka amin'ny fisian'ny media sosialy sy ny tranonkala dia heveriko fa misy fifandanjana rehefa manapa-kevitra momba ny vokatra, serivisy na endrika vaovao ianao, na izany aza, dia mihoatra ny vinavina. Ankehitriny satria mpampita haino aman-jery matanjaka ny mpanjifa dia mila mijery azy ireo koa ianao. Nanentana ity lahatsoratra ity ny boky.
Ity ny fomba fiasa raisiko amin'ny fanapahan-kevitra momba ny laharam-pahamehana amin'ny vokatra, serivisy na endri-javatra vaovao iasako:
Inona no mifikitra? Raha lazaina amin'ny teny hafa, inona no ataoko fa hanatsara ny fitazonana ny mpanjifa? Raha mpivarotra SaaS ianao, ohatra, manana API ve ianao? Mahafinaritra ny API satria tsy mila kaody kely, tsy dia misy mpanohana izy ireo, ary mitaky fampiasam-bola anatiny avy amin'ny mpanjifanao ianao mba hampidirina amin'ny vokatrao.
Inona no manaitra? Ny vokatra, serivisy na endri-javatra sasantsasany dia mendrika ny lanjany noho ny fiantraikan'izy ireo eo amin'ny sehatry ny indostria. Ohatra iray lehibe amin'izany ny fibaikoana finday ho an'ny trano fisakafoanana. Raha mbola tsy mahazo 10% fotsiny amin'ny varotra an-tserasera ny toeram-pivarotana pizza lehibe, dia nanam-bola amin'ny finday izy ireo.
Ny fampiasam-bola dia azo inoana fa ho resin'ny fandraharahana satria ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny finday moka. Na izany aza, tsy maintsy nihazakazaka nankany an-tsena izy ireo tamin'ny vahaolana mba hahafahan'izy ireo mahazo ny fiheverana. The hype vaovao indrindra dia widgets.
Sidenote: Mino aho fa ny fandaminana finday sy ny widget dia hanana ny androny - fa havaozina tanteraka mandritra ny fotoana mandeha rehefa mihatsara ny teknolojia. Ireo orinasa ireo dia nanambola tamin'ireny satria ny buzz sy ny orinasa ankolaka - fa tsy ny valin'ny asa mivantana.
inona ny Wom-mendri-kaja? Mikarakara sy ivelan'ny Internet ny mpanjifanao. Ny mpiasa dia mirona amin'ny indostria fa mifindra amin'ny orinasa samihafa. Midika izany fa zava-dehibe ny varotra Word Of Mouth ary mila mijery azy io ho toy ny fotoana mety ny orinasanao. Raha mamorona vokatra, serivisy na endri-javatra iasan'ny mpanjifanao akondro ianao dia mino ianao fa milaza amin'ny olon-kafa ao amin'ny indostria izany!
Inona no azo atokisana? Io no hevitra ao ambadiky ny zavatra novakiako hatreto Toned In. Ity no singa lehibe indrindra amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao - ny vokatrao, ny serivisinao na ny endri-javatrao dia tsy maintsy mameno orinasa mila. Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny fividianana ny vokatrao - ny tombony ho an'ny orinasako dia mihoatra ny vidiny. Raha tsy ilaina any, dia mety tsy hahomby. Angano fotsiny ny fivarotana ranomandry amin'i Eskimos.
Ny iray amin'ireo antony ireo dia mety hisolo toerana hafa. Indraindray, dia namolavola endri-javatra vaovao amin'ny fangatahana vinavina lehibe be izahay. Miloka izany, saingy fantatray fa handoa vola ny fampiasam-bola na dia tsy namandrika an'io mpanjifa manokana io aza izahay. Mino aho fa ny tondrozotra lehibe dia tokony hanana ireo hetsika efatra ao anatiny.
Tags: Dingana 6 mankany amin'ny marketing miditrafanatsarana ny atinympanjifa fanohananasary infografikafanatsarana ny jeografiaseo ara-jeografikafizotry ny varotra miditramitarika fikarakaranafanatsarana eo an-toeranaFivarotana Pragmatika
WordPress Mivoatra ao amin'ny CMS Powerhouse